Fanagasiana - Wikipedia
Ny fanagasiana dia fanovana mampanome endrika malagasy ny zavatra iray: teny, anarana na kolontsaina. Ny fanagasiana koa dia pôlitika nentin' ny governemanta malagasy taorian' ny rotaky ny mpianatra tamin' ny 1972 ary taty aoriana nandritry ny fanomezan-dalan' ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana faharoa tamin' ny taona 2007. Ny fanagasiana indrindraindrindra dia mikasika ny fampianarana satria araka ny dinika nataon' ny Firenena Mikambana, moramora kokoa ho an' ny ankizy no mianatra amin' ny teny nibeazany.
Fanagasiana ny fampianaranaHanova
Tamin' ny Janoary 1976 no lany ho filohan' ny Repoblika Demokratika Malagasy i Didier Ratsiraka. Nanangana fitondrana sôsialista izy ary niezaka ny hampifanaraka ny politikany amin' ny Firaisana Sovietika. Izy no nanangana ny antoko pôlitika Andrin' ny Revolisiona Malagasy (AREMA).
I Didier Ratsiraka dia namoaka ny Boky Mena izay miresaka mahakasika ny Revolisiona na Tolom-piavotana. Tao anatin' ny volana vitsivitsy dia noroahin' ny fanjakana malagasy ny tafika frantsay, nanakatona ny masoivoho frantsay sy ny kônsolata, nanato ho orinasam-pirenena ireo orinasa frantsay lehibe sady nohagasina ny fampianarana malagasy.
Ao amin' ny Boky Mena, Ratsiraka dia manamarina ny fanagasiana amin' ny faniriany ny hampifanaraka ny votoatin' ny fomba fampianarana amin' ny fepetra takian' ny Revolisiona ary manaiky fa ny teny frantsay dia mbola ilaina.
Ny Lalàna n°78-040 tamin' ny 17 Jolay 1978 mikasika ny rafitra ankapoben' ny rafi-panabeazana sy ny fanofanana dia nanangana vaomiera natao hamolavola sy handrafetana ny "malagasy iombonana", izay raha ny marina dia ho karazana fandravonana eo amin' ny fiteny malagasy ôfisialy (izay avy amin' ny teny merina) sy ny fitenim-paritra isan-karazany.
Ny pôlitikan' ny fanagasiana dia niafara tamin' ny fandraisana avy hatrany ny teny malagasy ho teny enti-mampianatra manerana ny sekoly ambaratonga fototra, ary nisy ny programa natao hanoloana tsikelikely ny teny frantsay amin' ny teny malagasy ao amin' ny fampianarana ambaratonga faharoan ka hatrany amin' ny oniversite. Na izany aza, hatramin' ny taona 1990, dia sekoly maromaro no nanohy nampianatra tamin' ny teny frantsay. Mbola mampiasa ny teny frantsay ihany koa ireo mpampianatra izay sahirana amin' ny fampianarana teny malagasy.
Nihena be ny anjara asan' ny teny fratsay tao amin' ny sekoly vaovao, saingy ny fandavana mafy ny teny frantsay dia nitarika fahavoazana lehibe. Vokatr' izany dia nitazona vonjimaika ny teny frantsay, izay eken' ny mponina amorontsiraka noho ny teny malagasy ôfisialy, ny fitondram-panjakana malagasy.
Nandiso fanantenana ny mponina ny fanagasiana ny fampianarana. Maro ny antony mahatonga ny tsy fahombiazana. Ny ankamaroan' ireo nandray anjara tamin' ny fanabeazana dia nanatsoaka hevitra fa ny taranaka mpianatra tamin' ity vanim-potoanan' ny fanagasiana ity dia tsy nahafehy ny teny malagasy voasoratra. Noheverin' ny mponina amorontsiraka ho fikasana hampanjakazaka ny Merina ny fanaovana ny fiteny merina ho fiteny malagasy ôfisialy.
Nanomboka tamin' ny taona 1983, dia tsy nahita asa tamin' ny alalan' ny diplôma malagasy ny ankamaroan' ny mpianatra. Tsy afaka nanome boky fianarana ampy amin' ny teny malagasy akory ny fanjakana sady ratsy kalitao ny boky novokarina. Ny mpampianatra rahateo koa tsy nampiofanina sady tsy ampy isa, tsy nisy ny fanaraha-maso ny fampianarana. Tsy voafehin' ny mpianatra na ny teny malagasy na ny teny frantsay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanagasiana&oldid=1042744"
Dernière modification le 6 Janoary 2022, à 09:11
Voaova farany tamin'ny 6 Janoary 2022 amin'ny 09:11 ity pejy ity.